I-China PV Tab Wire Bus Bar ye-DIY Soldering Solar C seli Fektri nabaphakeli | RISIN
Ikhebuli le-solar PV
I-1000V single Core Solar Cable
1500V i-Core Solar Cable eyodwa
I-1500V Double Core Solar Cable
Intambo Yomhlaba Ground
Ikhebula leBhethri leBVR AC
Isiqeshana se-Solar Cable
Isixhumi se-PV Solar
Isixhumi se-MC4 esingu-1000V
Isixhumi seMC4 1500V 50A
Isixhumi se-MC4 10mm2
Isixhumi se-Fuse se-MC4
Isixhumi sePaneli ye-MC4 M12
Isihlanganisi se-Diode ye-MC4
I-MC4 Sealing Cap
Isixhumi segatsha seMCD4
2 kuya ku-1 T Isixhumi seGatsha
3 kuya ku-1 T Isixhumi seGatsha
I-4 kuya ku-1 T Isixhumi segatsha
I-5 kuya ku-1 T Isixhumi segatsha
6 kuya ku-1 T Isixhumi seGatsha
Intambo Yesandiso ye-MC4
2 kuya ku-1 Y Isixhumi segatsha
3 kuya ku-1 Y Isixhumi Sesegatsha
I-4 kuya ku-1 Y Isixhumi segatsha
Ikhebuli Yomhlaba Emnyama
Ikhebula lamandla we-Anderson
IKhebula leBhethri leSAE
I-PV Fuse Breaker
Ibhokisi Lokufakelwa Lokusabalalisa
Solar Shaja Isilawuli
I-1200W Micro Inverter
Anderson Amandla Isixhumi
2P Anderson Isixhumi
3P Anderson Isixhumi
Ibha yebhasi ye-PV Tab Wire
I-KN95 Baphenduli Buso
Imiski Yobuso Elahliwe
Ikhebula le-1000V single Core
I-1000V Double Core Cable
I-1500V Core Cable eyodwa
I-1500V Double Core Cable
I-1000V TUV PV1-F Solar Cable 4mm Umkhiqizi
ISolar Panel Isixhumi se-MC4 Nge-DC 1000V TUV Kuvunyelwe
Ikhamera ye-PV Yekhwalithi enhle - 2to1 MC4 Y Con ...
Umkhiqizi wePwm Controller - 30A 40A 50A 60A 1 ...
I-DC Cable 1500V H1Z2Z2-K Solar Panel izintambo 6mm2
Ukuxhumana okuningi kwe-4 Solar Cable Isixhumi 1500V 50A
I-50A 120A 175A 350A esheshayo Xhuma 2 Pole Anderson Con ...
I-Solar Micro Inverter ye-Solar System MPPT 60HZ 600W ...
I-10A 20A 30A 30A 12V 24V Intelligent PWM Solar Charge Con ...
I-1000V Solar Outwardor Power Surge Arge Arge Ar ...
I-Auto Wire Car Extender Isixhumi 2 I-SA SA Battery C ...
I-2to1 MC4 Y Isixhumi Esixhuma Amaphaneli Solar ePara ...
I-1000V Mc4 Solar Extension Cable ene-MC4 Isixhumi M ...
I-MC4 T Connector Wiring Solar Panel 2to1 yochungechunge
I-10x38mm Soluse Fuse Inline ephethe i-1000V MC4 Fuse Conn ...
I-PV Tab Wire Ibhasi lebhokisi Lamaseli we-DIY Soldering Solar
I-wire ye-ribbon tab, ibha yebhasi nepeni leFlux zisetshenziselwa ngokukhethekile umugqa wokukhiqizwa module welanga.
I-Ribbon Tab Wire yephaneli ye-Solar (1.8 × 0.16mm, 20m / lot):
I-Bus Wire module ye-Solar (5 × 0.2mm, 2m / lot):
Ipeni lokubhala le-wire waya
· Iminyaka eyi-10 yesipiliyoni embonini yelanga nokuhweba
· Amaminithi angama-30 wokuphendula ngemuva kokuthola i-E-mail yakho
· Isiqinisekiso seminyaka engu-25 yesixhumi seSolar MC4 Isixhumi, Amakhandlela e-PV
· Akukho ukuyekethisa kwikhwalithi
Esedlule: Nqamula Ithuluzi le-MC4 Spanner Wrench Fit le-MC4 Solar Isixhumi
Olandelayo: Ukuxhumana okuningi kwe-4 Solar Cable Isixhumi 1500V 50A
RISIN ENERGY CO., LIMITED. yasungulwa ngonyaka we-2010 futhi itholakala edume ngokuthi yi- "World Factory", eDongguan City. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwe-10 yentuthuko eqhubekayo nokwenziwa okusha, i-RISIN ENERGY iye yaba ngumphakeli ophambili waseChina, odumile emhlabeni futhi othembekile Intambo ye-Solar PV, Isixhumi se-Solar PV, umphathi we-PV fuse, DC Circuit Breaker, Solar Charger Controller, Micro Grid Inverter, Anderson Power Isixhumi, Isixhumi Samanzi, Umhlangano wamakhebula we-PV, kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zezesekeli zesistimu ye-Photovoltaic.
We RINSIN ENERGY ngumthengisi we-OEM & ODM onguchwepheshe weSolar Cable kanye ne-MC4 Solar Connector.
Singahlinzeka ngamaphakeji ahlukahlukene njengama-roll rolls, amabhokisi, izigubhu zokhuni, ama-reels nama-pallets ngobuningi obuhlukile njengoba ucela.
Futhi singanikeza ngezinketho ezahlukahlukene zokuhanjiswa kwentambo yelanga nesixhumi se-MC4 emhlabeni wonke, njenge-DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMAX, FOB, CIF, DDP olwandle / emoyeni.
We RISIN ENERGY sihlinzeke ngemikhiqizo elanga (ama-Solar Cables kanye ne-MC4 Solar Connectors) kumaphrojekthi wesiteshi sonozungezi womhlaba wonke, akhiwe eSoutheast Asia, Oceania, South-North America, Middle East, Africa naseYurophu njll.
Uhlelo lwe-solar lubandakanya ipaneli yelanga, ubakaki obeka elanga, ikhebula elanga, i-MC4 isixhumi solar, Crimper & Spanner solar kits, PV Combiner Box, PV DC Fuse, DC Circuit Breaker, DC SPD, DC MCCB, Solar Battery, DC MCB, DC Load idivaysi, i-DC Isolator switch, i-Solar Pure Wave Inverter, i-AC Isolator Shintsha, i-AC Home Appliacation, i-AC MCCB, Ibhokisi Lokubanzi Elingenamanzi, i-AC MCB, i-AC SPD, i-Air switch kanye ne-Contactor njll.
Kunokusizakala okuningi kohlelo lwamandla we-Solar, ukuphepha okusetshenziswayo, mahhala i-polution, mahhala imisindo, amandla aphezulu esezingeni eliphezulu, akunamkhawulo endaweni yokusabalalisa izinsiza, akukho kudoti kaphethiloli nokwakhiwa kwesikhashana .Kungakho amandla e-Solar eseba kakhulu amandla athandwayo futhi akhuthaziwe emhlabeni wonke.
Q1: Yini imikhiqizo yakho eyinhloko yenkampani? UnguMenzi noma umthengisi?
Imikhiqizo yethu eyinhloko Amakhabethe Solar, I-MC4 Solar Izixhumi, I-PV Fuse Holder, i-DC Circuit breakers, i-Solar Charge Controller, iMicro Grid Inverter, i-Anderson Power Isixhumi neminye imikhiqizo ene-solar.Unguye uMkhiqizi onolwazi olungaphezulu kwe-10years kulanga.
I-Q2: Ngingayithola kanjani intengo yemikhiqizo?
Thumela uMlayezo wakho kithi nge-E-mail: sale @ risinenergy.com, sizokuphendula ngaphakathi kwama-30Minutes ngesikhathi sokusebenza.
Q3: Inkampani yakho yenza kanjani maqondana nokuLawulwa kwekhwalithi?
1) Zonke izinto ezingavuthiwe sikhethe eyodwa ephezulu.
2) Abasebenzi abaqeqeshiwe nabanekhono banakekela yonke imininingwane ekusingatheni umkhiqizo.
3) UMnyango Wokulawula Ikhwalithi obhekele ukuhlolwa kwekhwalithi kwinqubo ngayinye.
Q4: Ingabe uyanikeza i-OEM Project Service?
I-oda ye-OEM ne-ODM yamukelwa ngemfudumalo futhi sinolwazi oluphelele kumaphrojekthi we-OEM.
Ngaphezu kwalokho, ithimba lethu le-R&D lizokunikeza iziphakamiso zochwepheshe.
Q5: Ngingayithola Kanjani Isampula?
Sihlonishwe ngokukunikeza amasampula MAHHALA, kepha ungadinga ukukhokha izindleko zohamba.Uma une-akhawunti yokuhambisa, ungathumela iposi lakho ukuqoqa amasampula.
Q6: Isikhathi esingakanani sokulethwa?
1) Isibonelo: Izinsuku eziyi-1-3;
2) Ama-oda amancane: Izinsuku ezi-3 ukuya kwezi-10;
I-3) Yama-oda amaningi: Izinsuku eziyi-10-18.
ibha ye-pv yebhasi
Intambo yethebhu ye-pv
pv ithebhu yocingo
ibha yelanga elanga
ibha yelanga lephathi yelanga
Intambo yethebhu ye-solar
Sicela usinike imininingwane yakho ebalulekile:
I-2to1 MC4 Y Isixhumi Esixhuma Amaphaneli elanga e ...
I-50A 120A 175A 350A esheshayo Xhuma 2 I-Pole Anderso ...
I-BVR AC Battery Cable PVC Copper 16mm 25mm
I-1000V Solar Outdoor yedivayisi Yokuvikela Amandla i-Sur ...
I-Yellow Green Wire 4mm 6mm Copper Solar Groundin ...
ISolar Panel Isixhumi se-MC4 Nge-DC 1000V TUV App ...
I-1000V Mc4 Solar Extension Cable ene-MC4 Connec ...
I-10x38mm Soluse Fuse Inline ephethe i-1000V MC4 Fuse ...
Isixhumi se-Solar Diode Isixhumi se-Solar Panel Conne ...
Isixhumi se-Solar Inverter Isixhumi se-MC4 M12 PV Panel plug
Isixhumi se-Auto Wire Car Extender 2 Pin SAE Batt ...
I-UV evikela i-PV wire tight Solar Cable Tie